ထောင်ချခံထားရသော စစ်ရှောင်လွတ်မြောက်ရေး ကချင်လူငယ် ဆန္ဒပြ ခေါင်းဆောင် (၃)ဦး၏ ရုပ်ပုံ T-Shirt အင်္ကျီများ ရောင်းချ ဖြန့်ဝေပေးခြင်း အစီစဉ်ဖြင့် တရားမျှတမှု ရရှိရေး တောင်းဆိုသော လှုပ်ရှားမှုတခုကို ယနေ့ ဇန်န၀ါရီလ ၄ ရက် (၇၁)နှစ်ပြည့် လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာ ကချင်ပြည်နယ် မြို့တော် မြစ်ကြီးနားတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
မနောကွင်း အတွင်း “Free 3” ဆိုသော ပုံဖော်လှုပ်ရှားမှုနှင့် T-Shirt ရောင်းချ ဖြန့်ဝေခြင်းကို ကချင်လူငယ်များ ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
မတရား ပစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်း ခံရသော Hkangkum Lum Zawng (ကို လွမ်းဇောင်း)၊ Hkawn Zau Jat (ကို ဇော်ဂျတ်) နှင့် Saranum Nbau Nang Pu (ဆရာမ နန်ပူ) တို့ သုံးဦး လွတ်မြောက်လာရေးနှင့် လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတသော တရားစီရင်ရေး စနစ်ကို လိုလားသောကြောင့် ယခုလို လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာ လူငယ်များစုဝေးပြီး T-Shirt အင်္ကျီ၊ Sticker များ သုံးကာ တောင်းဆိုခြင်းဖြစ်သည်ဟု လူငယ် လှုပ်ရှားမှု ဦးဆောင်သူ တဦး Shayi Sut Seng Htoi (မဆွတ်ဆိုင်းထွယ်)က ကချင်သတင်းဌာန KNG ကို ပြောပါသည်။
T-Shirt အင်္ကျီများ ရောင်းချပြီး ရရှိသော ဝင်ငွေများကို စစ်ရှောင်စခန်းများ နှင့် ချုပ်နှောင်ခြင်းခံရသော ခေါင်းဆောင် ၃ဦး၏ မိသားစုများကို ကူညီပေးရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ဟု သူမ က ဆိုသည်။
တပ်မတော်နှင့် ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကြား ၂၀၁၈ ကချင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော တိုက်ပွဲတွင်း တပ်မတော်ဘက်က တားဆီးခံထားရသော စစ်ရှောင်ပြည်သူများ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ကချင်လူငယ်ဆန္ဒပြပွဲ ကို မြစ်ကြီးနားမြို့တွင် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီလ ၃၀ မှ မေလ ၈ ရက်ထိ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
၎င်းနောက် ဆန္ဒပြပွဲ ဦးဆောင် Shd. Hkangkum Lum Zawng၊ Slg. Hkawn Zau Jat၊ Saranum Nbau Nang Pu တို့ကို ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၀၀ဖြင့် တပ်မတော်ကို အသရေဖျက်စေသည် ဟု မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် (မပခ)မှ ဗိုလ်မှူးကြီး မျိုးမင်းဦး က တရားစွဲခြင်းဖြစ်သည်။
မြစ်ကြီးနားမြို့နယ် တရားရုံးမှ ၎င်းစွဲချက်ပေါ် (၇)လကျော် ကြားနာစစ်ဆေးပြီးနောက် ဒီဇင်ဘာ(၇)ရက်နေ့ တွင် ဆန္ဒပြ ခေါင်းဆောင် ၃ဦးကို ထောင်ဒဏ် ၆လစီ နှင့် ငွေဒဏ် ကျပ် ၅သိန်းစီ ချမှတ်ခဲ့သည်။
ယခုလို တရားရုံး၏ စီရင်ခြင်းသည် တရားမျှတမှု လုံးဝ မရှိကြောင်း ပြည်တွင်းပြည်ပ လူငယ်နှင့် လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့များ အပြင် နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့များမှ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်လိုက်ပါသည်။ ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရပေါ် လူထုယုံကြည်မှုလည်း ကျဆင်းစေခြင်း ဖြစ်သည်။
စစ်ကြောင့် စွန့်ပစ်ထားသော Nam San Yang ကျေးရွာတွင် ပထမဆုံး ခရစ္စမတ်ပွဲ...